निःशुल्क गाडिहरु यो गर्मी किशोरहरुलाई लागि | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > निःशुल्क गाडिहरु यो गर्मी किशोरहरुलाई लागि
सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ अप गर्न लागि निःशुल्क रेल हुनेछ 30,000 किशोर यो ग्रिष्म ऋतुमा. निःशुल्क टिकट संख्या पनि माग आधारमा बढाउन सक्छ. ईयू अतिरिक्त यो प्रस्ताव वृद्ध किशोर उपलब्ध गर्नेछ घोषणा 18 र साना. कारण मुक्त रेल टिकट को नम्बरमा, ईयू लागि लागत भन्दा बढी हुन सक्छ 12 लाख पाउण्ड.
यूएस यो गर्मी मुक्त रेल भेटी.
किन मुक्त रेल टिकट दिन टाढा?
मा 1972 रेलवे स्टेशन युरोप मा गर्मी जवान मानिसहरू को पूर्ण थिए. किनभने उडानहरू यो समयमा धेरै महंगा अझै पनि, $38 युरोप भर एक रेल पास आकर्षक देखिन्थ्यो लागि. यसबाहेक, रात रेल गरे भनेर आवास धेरै किफायती थियो. पनि, रेल पासेसहरू को सबै समावेश पश्चिमी युरोप. मा 1998 रेल पासेसहरू तब सम्म मानिसहरूले मात्र उपलब्ध थिए जो 26 उमेर सीमा हटाइएको थियो. इन्टरिलिंग यति लोकप्रिय थिएन, र देशहरूले उनीहरूको रेल सेवा प्रयोग गरेर पर्यटकहरूका लागि आफ्नै मूल्यहरू सूचीबद्ध गर्न शुरू गरे. यसबाहेक, त्यसपछि सस्ता उडानहरू भयो उपलब्ध अनिवार्य छोडेर interrailing युरोप यात्रा गर्न एक महंगा र अप्रभावी तरिका रूपमा. अब युरोपेली संसदले यो निर्णय गरेको छ कि त्यो किशोर किशोरीहरूको लागि लोकप्रिय विकल्पको रूपमा इन्टरलिiling्गलाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छ र विनियोजित गरिएको छ 12 परियोजना को लागि लाख पाउण्ड.
क्रममा निःशुल्क टिकट को एक लागि लागू गर्न, तपाईं आफ्नो आवेदन पेश गर्न आवश्यक युरोपेली युवा पोर्टल जून मा. त्यसपछि न्यायपीठ आवंटित गर्नेछ 15,000 निःशुल्क रेल टिकट. दोस्रो सेट गर्दा 15,000 टिकट यसलाई अन्ततः हुनेछ योजना गरिएको छ बजेट निर्भर र पहिलो देखि प्रतिक्रिया 15,000 सहभागीहरू. पेश सही मिति जुन 12 र जुन बीच हुनेछ 26. तपाईं हुनेछ यदि तपाईं एक टिकट को लागि लागू गर्न योग्य हुनुहुन्छ 18 जुलाई 1st मा उमेर को वर्ष. 1900 यी निःशुल्क रेल को टिकट ब्रिटिश आवेदकहरुलाई विनियोजन गरिनेछ. त्यसै गरी, फ्रान्स र जर्मनी will also receive 1900 टिकट. तुलनामा, Irish applicants will only receive 140 टिकट.
प्राग बर्लिन गाडिहरु गर्न
क्रममा तपाईंलाई निम्न देखाउन आवश्यक मुक्त रेल लागि सबै भन्दा राम्रो आवेदन बीच छलफल गर्न;
पहिले, तपाईंको प्रेरणा कम्तिमा एक यूरोपीय सांस्कृतिक विरासत साइट भ्रमण गर्न. यसबाहेक, तपाईंले यूरोपीय सांस्कृतिक सम्पदाको बारेमा एक प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ. प्रश्नोत्तरीले युवा र युरोपेली संसद चुनावको बारेमा प्रश्नहरू पनि सामेल गर्दछ.
यसबाहेक, you will need to expressadesire to becomeaDiscoverEU राजदूत. यो इच्छा रिपोर्ट समावेश गर्नुपर्छ आफ्नो यात्रा अनुभव र आफ्नो फोटो बनाउने available to DiscoverEU anniversary photo exhibition at the European Parliament.
ल्योन एयरपोर्टबाट नाइस रेलहरू
हाम्रो साथ सस्ता उपलब्ध रेल टिकट बुक
हामीलाई थाहा छ किनभने तपाईं सबै भन्दा राम्रो मूल्य खोजिरहेको यदि त तपाईं निःशुल्क रेल टिकट प्राप्त भएन, हामी पाउन छिटो खोज इन्जिन प्रदान सस्तो रेल टिकट चाँडै. हामी तपाईंलाई थप यात्रा र भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ कम. क्रेडिट कार्ड सहित धेरै भुक्तानी विकल्पहरू प्रयोग खरिद रेल टिकट, PayPal, and Alipay. Whether you are looking for रमणीय दृश्य, राम्रो खाना, रोमान्टिक यात्राको वा युरोप यात्रा गर्न कुनै पनि अन्य कारण, हामी सबै भन्दा राम्रो टिकट प्रदान गर्न सक्छन्.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-trains-summer-teens%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#मुक्त #freetrains trainticket रेल सुझावहरू